Toriteny Alahady 09 Aout 2009 : Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia izay manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany – FJKM Ambavahadimitafo Toriteny Alahady 09 Aout 2009 : Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia izay manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany |
Toriteny Alahady 09 Aout 2009 : Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia izay manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany
Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Rainitska sy ii Jesoa Kristy Tompo.
Ny tenin ‘Andriamanitra ho raisintsika androany dia izay voasoratra ao amin’i Jaona 15 : 13 manao hoe :
« Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia izay manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany »
Tenin’ny Tompo tsy vaovao amintsika izany fa efa fandre matetika nefa dia mbola naverina indray amin’izao ora izao mba hanamafisantsika izany atao hoe « Fitiavana ny sakaiza » izany, ary koa mba itadiavantsika vahaolana sy lalan-kizorana ahafahantsika mahatanteraka izany.
Ato amin’ny perikopa izay novakiana androany dia misy sary anankiroa na tantara anankiroa aseho amintsika manamafy izany fitiava namana izany :
Ny tantaran’i Estera
I Estera dia ilay tovovavy jiosy zanakavavin’ny rahalahan-drain’i Mordekay kamboty ray sy reny. I Mordekay no nanangana azy ho zanaka. Manana bika aman’endrika tsara tokoa i Estera ary dia lasa vadin’ny mpanjaka Asierosy izy noho ny fitantanan’i Mordekay ny fiainany.
Ny Mpiraiministry asierosy tamin’izany dia Amana, ary tsy nankasitraka velively ny fihetsik’i Mordekay satria nanelingelina azy teo amin’ny tetika ratsy efa nokendreny no sady tsy nandohalika teo anatrehany tahaka ny mpiasa rehetra manontolo.
Fantatr’i Mordekay izany teti-dratsy izany koa dia niangavy an’i Estera izy hanelanelana any amin’ny mpanjaka. Na dia nandà aza i Estera tamin’ny voalohany dia nanaiky ihany taty aoriana.
Ny tantaran’i Jesoa Kristy
I Jesoa Kristy tsy nanota akory nefa notevatevaina, nijaly, nitondra fahoriana, nomboina teo amin’ny hazo fijaliana ary maty. Nohon’ny inona ? Noho ny fahotantsika olombelona mba hamonjena ny olona rehetra izay mino Azy : Jesoa Kristy maty namonjy ny sakaizany.
I Petera 2 : 21 : «Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany »
Ry hava-malala, raha azontsika tsara izany ny tenin’ny Tompo dia adidy goavana no napetraky ny Tompo ho an’ny kristiana, na izay rehetra mitondra ny anarana hoe kristiana. Adidy goavana satria mitady izay hahasoa ny hafa, mikendry ny tsara ho an’ny hafa, manampy ny hafa ho amin’ny lalam-piainana tsaratsara kokoa satria izany no fanehoam-pitiavana mendrika ary ankasitrahan’Andriamanitra : « Tiava ny namanao tahaka ny tenanao »
Mifanohitra tanteraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny làlam-piainana izorantsika
Raha ny zavatra hita aloha, aoka dia tsorona fa sarotra ho antsika olombelona izany ; sarotra ho antsika olombelona ny hisahirana ho an’ny hafa, handany andro na handany fotoana na vola ho an’ny olon-kafa. Vitsy dia vitsy ny olona handany ron-doha mba hampisondrotra na hampisongadina ny hafa, mainka moa fa izany hoe manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany izany.
Ny zava-misy dia izao : ny ho ahy aloha, ny ho an’ny tenako, ny mahasoa ahy, ny tsara ho ahy. Raha misy misakantsakana ny soa ho an’ny tenako dia hadaboko. Ary tsy vitan’ny hoe ho ahy ihany, fa mbola karohina koa ny tombontsoan’ny hafa ho any amin’ny tena indray. Koa aza gaga isika raha misy ny ady, ny korontana, ny lolom-po, ny valifaty hita etsy sy eroa. Tsy vitan’ny kintrano an-trano ihany izany fa tonga hatreny amin’ny tribonaly. Izay azo alaina aloha dia alaina.
Ry havana mifanohitra tanteraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny làlam-piainana izorantsika amin’izao fotoana izao. Ka inona no atao mba ahafahantsika manakaiky kokoa izany atao hoe « Sitrapon’Andriamanitra’ izany. Hoy ny hirantsika manao hoe : « Ry zaza mpiodina mba miverena ».
Mifona ho an’ny tena ary mifona ho an’ny hafa
Koa ny tenin’Andriamanitra toriana sy vakiana ary renesina ka atao amintsika isan’andro dia antso, ka ny teny toriana omban’ny Fanahy Masin’Andriamanitra dia misy akony any am-pon’izay mandre. Tsy azo avela ho fihetseham-po fotsiny anefa izany fa tsara raha avadika ho fibebahana tanteraka. Ny zavatra tokony atao izany dia ny mibebaka amin’Andriamanitra. Aoka ho tsarovana fa raha nanomboka ny asany tety an-tany i Jesoa dia ny fibebahana no notoriany. Ny fibebahana izay làlana tsy maintsy lalovan’ny olona hino an’i Jesoa mba handraisany famelan-keloka ka hananany fiainana mandrakizay. Koa rehefa nibebaka tokoa isika dia afaka mandray an’i Kristy, mankato ny teniny.
Hoy Jaona 15 : 10 : « Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin’ny fitiavako, tahaka ny itandremako ny didin’ny Raiko sy itoerako amin’ny fitiavany »
Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay ; koa rehefa ao anaty i Jesoa Kristy dia afaka mangataka aminy isika ny hanalany ny fo vato. Hoy ny Tompo hoe izay mangataka amiko dia omeko ; omeny fo vaovao isika, fo vaovao tia namana.
Ankehitriny, raha misamboaravoara ny fiainam-pirenena, aza diso hevitra isika hoe ny olona hafa ihany no nahatonga izao, na ry zalahy ihany no nanao an’itsy na iroa, na ny mpitondra fanjakana ihany na ny mpanao politika ihany no be tetika tetsy sy teroa.
Tsia. Jereo ny tenanao ; eritrereto ny teny navoakan’ny vavanao. Inona no tsara nataonao mihoatra noho ny sasany ? Noho izany, aleo manetri-tena , mifona amin’Andriamanitra, mifona ho an’ny tena ary mifona ho an’ny hafa.
Rehefa samy mahatsiaro ny tsy mety nataony ny tsirairay avy ka mahatsiaro manao ny marina amin’ny namany avy ny kristiana rehetra ; rehefa miezaka tsy handoto ny hafa ny mpino ka mitarika ny namana ho amin’ny lala-marina dia ho hitantsika ny voninahitr’Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny ezaka ataon’ny olona.
Fanasina isika kristiana
Eto am-pamaranana ry havana dia tsara ny mampahatsiahy fa isika kristiana dia raisin’ny Tompo, ary efa noraisin’ny Tompo ho sira, fanasina miaro izao tontolo izao tsy ho lo.
Voninahitra izany ary sambatra loatra isika nofidin’ny Tompo ho fitaovana sarobidy tahaka izany. Koa alao hery ary ka mahereza. Mijoroa ho mendrika izany anaram-boninahitra izany ; mazotoa amin’ny asa tsara rehetra. Ho amintsika rehetra anie ny fahasoavan’Andriamanitra.
Hiara-hivavaka isika :
Misaotra Tompo ô fa nomenao fotoana indray izahay nihenoana ny teninao. Ombay ny herinao izahay ry Tompo mba ahafahanay manatanteraka na dia ny ampahany ihany aza amin’izay teny noheverinay fa tsara ka tokony ampiarinay eo amin’ny fiainanay. Misaotra Tompo ô. Amen.
Randrianoelina Fara, Katekista